Gaalkacyo Uu kasocdo Barakacii ugu xooganaa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gaalkacyo Uu kasocdo Barakacii ugu xooganaa
Wararka aan ka helayno Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, ayaa sheegaya in Maanta oo Axad ah Shacabka Magaaladaasi ay billaabeen inay ka barakacaan Guryahooda.
Wariyaheena kusugan magaalada galkacyo ayaa soosheegaya in Dadka ay soo wajahday Cabsi xoogan oo ku aadan Xiisadaha u dhaxeeya Maamulada Galmudug & Puntland, taasi oo qarka u saaran in Ciidamada Labada dhinac uu Dagaal dhexmaro.
Ganacsiga Waqooyiga & Koonfurta Gaalkacyo ayaa ah Maanta mid xiran, waxaana Magaalada Labadeeda dhinac soo biix dhaafiyay Ciidamo ka kala tirsan Galmudug & Puntland kuwaasi oo laga cabsi qabo inay ku dagaalamaan Magaalada.
Cabsida Shacabka ayaa sare u kacday markii Maamulka Puntland uu iska-dhega tiray Digniintii Maamulka Galmudug oo ahayd in Diyaaradaha aysan kasoo degi karin Garoonka C/llaahi Yuusuf ee ku yaalla Waqooyiga Gaalkacyo.
Maamulka Galmudug wuxuu sheegay inuu soo ridayo Diyaarad kasta oo isku dayda inay kusoo degto Garoonka C/llaahi Yuusuf, kaasi oo Madaxweyne C/qaydiid ku dhawaaqay inuu xiran yahay.
Puntland waxaa lagu eedeeyay inay billowday Xiisaddda taagan, markii uu Maamulka C/wali Gaas uu si gardarro ah u xiray Garoonkii Galmudug oo ku yaalla Koonfurta Gaalkacyo, kaasi oo la dhisay 10 Bilood kahor.
Madaxweyne C/qaybdiid wuxuu sheegay in haddii Puntland xirtay Garoonka Galmudug, uusan sidoo kale shaqeyn doonin kan C/llaahi Yuusuf, waxaana arinta ay noqotay “Mindi, Mindi ku taag”, iyadoo Shabkuna taasi Cabsi weyn gelisay sababtayna inay qaxaan Maanta.Gaa